၂၅ ဘလော့ဂ်လုပ်ရန်သင်ပြYouနာရှိနိုင်သည့်လက္ခဏာများ။ Martech Zone
စနေနေ့, ဧပြီ 14, 2007 စနေနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 18, 2017 Douglas Karr
အားဖြင့်မှုတ်သွင်း BittBox ၏စိတ်ကူးကောင်း post, ငါသည်ငါ့ blogging ပြproblemနာနှင့်ပတ်သက်။ ငါ့ကိုယ်ပိုင် post ကိုရေးသားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ blogging ပြproblemနာရှိနိုင်တဲ့လက္ခဏာ ၂၅ ခုဒီမှာ။
သင့်ကွန်ပျူတာ to ည့်ခန်းကိုကွန်ပျူတာသို့ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်သင်ပြန်လည်စီစဉ်ပေးသည်။
သင်သည်သင်၏ငှားရမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ပေါင်နှံခြင်းမပြုမီသင်၏ DSL သို့မဟုတ် Cable ဥပဒေကြမ်းကိုသင်ပေးဆောင်ရသည်။
မင်းရဲ့နှစ်ပတ်လည်ကိုမသိဘူး၊ Technorati အဆင့်။
သင်၏အခင်းအကျင်းကိုမည်သို့ပြုပြင်ရမည်ကိုသင်မသိနိုင်ချိန်တွင်သင့်ကိုယ်ပိုင်ရေးသည် WordPress ပလပ်အင်။
WordPress 2.1 autosave feature သည်သင့်အားစိတ်သက်သာရာရစေပြီးနောက်ဆုံးတွင်ပို့စ်တင်စဉ်ရေချိုးခန်းခဏနားနိုင်သည်။
မင်းသူငယ်ချင်းတွေအတွက်ဘလော့ဂ်တွေထားတယ်၊ မိသားစု, နှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ။
သငျသညျ ရှိaအများကြီး of မိတ်ဆွေများ ထို သငျသညျင့် ဘယ်တော့မှ တကယ်တော့ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး မဟုတ် စကားပြော သို့ in စစ်မှန်သော ဘဝ။
မင်းက Herman Miller က သင့်မွေးနေ့အတွက် Aeron
သင်ကိုယ်တိုင်တစ်ခုလိုချင်နေသည် iPhone ကို မင်းဘဝမှာ Mac ကိုတစ်ခါမှပိုင်ဆိုင်ဖူးခြင်းမရှိဘူး။
ဘာညစာစားချင်လဲလို့မေးတဲ့အခါ၊ John Chow မှဗန်ကူးဗားရှိစားသောက်ဆိုင် - ဒါပေမယ့်မင်းက Indiana မှာနေတယ်။
မှတ်ချက်များမပါဘဲမည်သည့်ဘလော့ဂ် sucks ... မှလွဲ။ ရှေဘလော့.
သင်သိလား Ze ရယ်စရာ Hugh စီးပွားရေးကဒ်ပြားတွေပေါ်မှာရုပ်ပြတွေဆွဲပြီး၊ အမှတ် သူ့ရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့တကယ်တကယ်ကံကောင်းခဲ့ပါတယ်။
“ info” မှအဆုံးသတ်သော site မှမှတ်ချက်သည် blog spam ဖြစ်သည်ကိုသင်သိသည်။
broadband ရှိသည့် Starbucks နှင့် ၃ ခုအတွင်း၌သာတည်းခိုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သင်ဘ ၀ ကိုရှင်သန်နေစေသည့်အမှန်တကယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုခြင်းထက်မိမိကိုယ်ကိုဘလော့ဂါအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
ညစာစားခြင်းတွင် ctrl-t နှင့်ပါဝင်ခြင်းပါဝင်သည် Papa John's.
လူမျိုး၊ ဘာသာရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ လိင်နှင့်တယူသန်ထင်ရာစိုင်းဆိုင်ရာကျွန်ုပ်၏စည်းကမ်းချက်များ (၃) ချက်
ကလစ်နှိပ်သော Web Analytics
ဧပြီ 14, 2007 မှာ 8: 18 pm တွင်
ပထမ ဦး ဆုံးအားနည်းချက်ကတော့နံပါတ် ၁၃ ပါ။ လူကိုယ်တိုင်မတွေ့ဖူးသော်လည်းမရေမတွက်နိုင်အောင်များပြားသောစကားသံများပြောဆိုခဲ့သည်။
# 16, သင်တကယ်တော့ Mac ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်၊ ဒါကြောင့်ဒါကမင်းနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူး🙂
နံပါတ် ၂၀ နဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်တော့ဘလော့ဂ် spam မဟုတ်တဲ့ .info ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေဆီကမှတ်ချက်တွေကျွန်တော်ရခဲ့တယ်။
နံပါတ် ၂၃ ကအပြစ်အနာအဆာမရှိပေမယ့်ဟိုတယ်အချို့မှာတကယ်လို့ Broadband ရှိပြီး Starbucks ကို the ည့်ခန်းမှာဒါမှမဟုတ်သူတို့အခမဲ့ donuts ရှိတဲ့serveရိယာမှာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးတာကိုတွေ့ခဲ့တယ်။
ဧပြီ 14, 2007 မှာ 8: 19 pm တွင်
အပြစ်အနာအဆာလား ဒါဟာသရော်စာ! ပိုကောင်းသောဟာသဉာဏ်ရှိသည် Sean ။ 🙂
ဧပြီ 14, 2007 မှာ 8: 28 pm တွင်
တူညီတဲ့ဝါကျမှာဟာသ Doug … hehe …အခမဲ့ဒိုးနက်များနှင့် Starbucks ရှိသည်။ ယခုထုံးစံအတိုင်းဟာသပဲ
ဧပြီ 14, 2007 မှာ 9: 07 pm တွင်
Phew! ငါကအခြားသူများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီသော်လည်း # 13 မှာ link ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အပြစ်ရှိလား ဒါကကျွန်တော့်ရဲ့ feeds တွေပေါ်လာတဲ့အခါ "uh-oh ... ငါဖမ်းမိပြီ။ " ပို့စ်ကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာမင်းကငါ့ကိုသိတယ် ။-)
အဆိုပါ chuckle (နှင့်ခင်မင်ရင်းနှီး) အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဧပြီ 14, 2007 မှာ 9: 35 pm တွင်
ဧပြီ 14, 2007 မှာ 10: 16 pm တွင်
# ၂၆ ။ Link-bait မှအခြားဘလော့ဂါများအားသင်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အထူးစာရင်းပြုစုထားသည်🙂
ဧပြီ 14, 2007 မှာ 10: 17 pm တွင်
ဟုတ်ပါတယ်, Kiltak! 🙂
ဧပြီ 15, 2007 မှာ 2: 00 AM
ငါ့အတွက်9ထဲက 25 ... မျှော်လင့်ချက်ရှိနေတုန်းပဲ။
မင်းဘဝမှာ Mac ကိုတစ်ခါမှပိုင်ဆိုင်ဖူးခြင်းမရှိပေမယ့်သင်ဟာ iPhone ကိုလိုချင်နေတယ်။
၎င်းသည် blogoman ဖြစ်ခြင်းနှင့် Applemarketingbug ၏ကိုက်ခြင်းကိုခံရခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။ (အခြေခံအားဖြင့်၊ စတိဗ်ဂျော့ဘ်ကတင်ဆက်မှုတစ်ခုလုပ်တိုင်းမင်းကိုပဲပြောတာပါ) ရှိ ကရှိသည်ဖို့။ အယ်ဒီတာများအတွက်ယနေ့ Apple သည် Final Cut Pro အသစ်ကိုထုတ်ဖော်လိမ့်မည်။ 🙂
နံပါတ် ၂၇ သည်သင်၏ဘလော့ဂ်ကိုသင်၏ဆဲလ်ဖုန်းထက်မှတ်ချက်များအတွက်မကြာခဏစစ်ဆေးသည်
နံပါတ် ၂၈ သည်မည်သည့် Word Press ၏နောက်ဆုံး version သည်သင်သိသည်။ အကယ်၍ သင်၏ဘလော့ဂ်ကိုဗားရှင်းဟောင်းတွင်အသုံးပြုနေပါကအဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက်ကိုမိနစ်အနည်းငယ်တိုင်ငြင်းဆန်နိုင်သည်။
ကောင်းသောတနင်္ဂနွေကိုကျွန်ုပ်၏ virtual သူငယ်ချင်းပေးပါ
ဧပြီ 15, 2007 မှာ 9: 08 AM
# 27 ငါနှင့်အတူလုံးဝမှန်သည်! အရမ်းရယ်ရတယ်!
ဧပြီ 15, 2007 မှာ 2: 07 AM
# 29 သည်ဘလော့ဂ်များစွာတွင်ထိပ်ဆုံးမှတ်ချက်ပေးသူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဧပြီ 15, 2007 မှာ 3: 16 AM
ကောင်းသောတ ဦး တည်း Doug! သင့်အတွက်နောက်ထပ်တစ်ခုရှိသည်။ သင်သည် Blogaholic တစ် ဦး ဟုတ်မဟုတ်သိနိုင်ရန်နည်းလမ်း ၁၀ ခု။
ဧပြီ 15, 2007 မှာ 9: 10 AM
Bloke - အံ့သြစရာပဲ! ထိုအခါငါကငါ့နံနက်ကော်ဖီ ... oy မတိုင်မီမှတ်ချက်များဖတ်နေဒီမှာထိုင်နေတာ!
ဧပြီ 15, 2007 မှာ 2: 20 AM
# 30 အလွန်များစွာသောပို့စ်များသို့မဟုတ်မှတ်ချက်များ0ငနှင့်စတင်သည်သောအချိန်တွင်လာ
# ၃၁ မလှုပ်မရှားသုံးလအကြာသင်သည် RSS feed ကိုသင်စာရင်းသွင်းထားဆဲဖြစ်သည်။ 🙂
ဧပြီ 15, 2007 မှာ 6: 07 AM
ဧပြီ 15, 2007 မှာ 9: 59 AM
ဤအရာများ၏သုံးပုံတစ်ပုံသည်ကျွန်ုပ်အလွန်အပြစ်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်စာရင်းသွင်းနိုင်သည့်အဆင့် (၁၂) ဆင့်ရှိပါသလား။
ဧပြီ 15, 2007 မှာ 12: 10 pm တွင်
@Thor: တကယ်တော့ Doug သည်ဤအတွက် 12 step program ကိုတီထွင်နေသော်လည်း WordPress plugin form တွင်စွဲနေသူအားလုံးအတွက်ပိုမိုလွယ်ကူသွားမည်။
ဧပြီ 15, 2007 မှာ 12: 14 pm တွင်
ကောင်းသောစာရင်း Doug ကျွန်ုပ်အိမ်တွင်ကင်မရာရှိကြောင်းမယုံနိုင်အောင်ပါ။ ငါ ya ပြောပြအပေါ်သူလျှိုခံနေပါတယ်!
ဧပြီ 15, 2007 မှာ 2: 51 pm တွင်
Hilarious, Doug ။ အိမ်နှင့်နီးကပ်စွာမထိပါက ပို၍ ပင်ပျော်စရာကောင်းလိမ့်မည်။
ဧပြီ 16, 2007 မှာ 12: 44 pm တွင်
Randy ချားလ်စ် Morin
ဧပြီ 18, 2007 မှာ 4: 25 AM
ငါအောင်တယ်။ (၂၅) အနက် (၁၃) သည်ကျွန်ုပ်နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ 🙂
16:2009 pm မှာနိုဝင်ဘာ 5, 41
ငါ blogging နှင့်ဤ site ကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပတ်သက်။ အများကြီးပြောသော site ကိုရှာဖွေနေခဲ့သည်, ငါ 25problems ဖတ်ရှုခြင်းနှင့်ငါပြproblemနာကိုရှောင်ရှားရန်နှင့်အဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုကြည့်ရှုရန်ငါကြိုးစားပါလိမ့်မယ် .. ..